Soomaaliya oo guddoomisay 41 sano ka dib Golaha loo dhan yahay ee QM. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Soomaaliya oo guddoomisay 41 sano ka dib Golaha loo dhan yahay ee...
Soomaaliya oo guddoomisay 41 sano ka dib Golaha loo dhan yahay ee QM.
Guddoomiye ku xigeenka golaha guud ee kal-fadhiga 75-aad ee Qaramada Midoobay, ahna danjiraha Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay danjire Abuukar Cusmaan (Abuukar Balle) ayaa la wareegay shir guddoonka qayb ka mid ah fadhiga 75-aad ee golaha loo dhanyahay, kaas oo sanadkan madaxda caalamku badankood ay kaga qaybgalayaan Online-ka.
Previous articleDowladda Iran oo sheegtay in ay diyaar u tahay in Mareykanka Maxaabiis is dhaafsadaan.
Next articleTurkiga oo cadaalad xumo ku tilmaamay shirkad Turkish ah oo Midowga Yurub cunaabateeyeen.